India Inosimbisa Apple Inobata Nezvakakosha Mibairo Pane Chero Kugadzira Chirimwa | IPhone nhau
Hazvina kutaurwa kwenguva yakareba, asi chokwadi ndechekuti Mamiriro akanyanya emubhadharo munyika dzakaita seIndia akaisa makambani makuru seApple mukutarisa izvo zvinowedzera kufambisa maitiro ekugadzira kune idzi nyika. Apple inoita mari yakawanda kubva kune yega iPhone yainoita, asi inopa mubairo wekurarama kune wese munhu ane chekuita nekugadzirwa kwemidziyo iyi? Zvino hurumende yeIndia ichangobva kutaura nezve iyo Mutoro weApple sekambani ine mubhadharo wakaderera wezvigadzirwa zvayo muIndia. Ehe, vane mutoro wakazara. Ramba uchiverenga kuti isu tinokupa iwe zvese zveiyi nyonganiso nyowani ine ngozi misha mu nyika dzakaita India.
Zvese izvi zvinouya mushure me mhirizhonga pafekitori yeWistron muBangalore, India. Mhirizhonga yakatungamira kumiswa kwetambo yegungano ye iPhone. Izvo zvaive zvekuti vashandi vane mutsindo vakarwisa zvikamu zvegungano, vakapwanya mahwindo, uye vakatotanga moto mukati meichi chirimwa. Wistron, anoona nezve kugadzirwa kweiyo iPhone muIndia anofungidzira kuti nyonganiso idzi dzakonzera kukanganisa kwemamiriyoni makumi matanhatu emadhora kukambani. Chikonzero? mari inotyisa isina kumboongororwa mushure memisangano pakati pevashandi nevashandi.
"Maererano neContract Labor (Regulation and Abolition) Act ya1970, kontrakta anoona nezvekubhadharwa kwemubairo uye mukuru wevashandisi ndiye anozozvitakura," akadaro mumwe wavo. Izvi zvinoreva kuti zviremera zvinogona kutsvaga tsananguro kubva kuApple neWistron.
Asi sezvauri kuona mundima yapfuura, Mitemo yeIndia yevashandi inojekesa kuti mushure mekundikana kwakadai pakati pevashandi naWistron, ndiApple, kontrakta, anofanirwa kutora yemamiriro acho ezvinhu uye bvuma mutoro. Nekuda kwayo, Apple inenge ichiongorora mamiriro evashandi ava, vakatombomisa zvibvumirano zvese neWistron kudzamara mamiriro ezvinhu aya ajekeswa. Chinhu zvakafanana nezvakaitika naPegatron mwedzi mishoma yapfuura mushure mekuziva izvozvo vashandi vangadai vachishanda nguva yakawandisa vasina kupihwa mari, chimwe chinhu chakatungamira Apple kumisa kugadzirwa kwayo kuPegatron nekutyora kodhi yemafambiro yaApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » India inosimbisa Apple ine mutoro wemari inotyisa pane chero chigadzirwa chekugadzira
Trincoso Bheya akadaro
Munhu, hazvigone kudaro. Apple inotonhorera. Apple inotonhorera. Apple inotarisira, kutanga nezve Apple, kozoti Apple, uye pakupedzisira Apple. Apple inongogadzira zvigadzirwa zvevanhu vane hanya (kana kufunga kuti vakakosha). Apple inowanikwa pamitengo yepamusoro inoseka kutora mifananidzo uye kushandisa meseji pakarepo.
Pro vanhu vanotenga Apple vanozviita nekuda kwezvikonzero zvakati.
1. Ita kuti logo iratidzike kuti vanhu vaone
2. Kugona kutaura mune chero hurukuro "Ndakaita ... ne iPhone yangu, pane kuti nditi, semunhu chero akajairika," ndakaita ... nefoni yangu.
3. Nakidzwa kubhadhara zvachose zvese
4. Kushushikana kuti kana vakabhadhara bundle yefoni mbozha, chikamu chakanaka chinosvika kuvashandi veIndia vanovaunganidza… kwete… kwete izvo.
5. Taura kuti Steve Jobs akavatungamira.
Handizive, zvinondipa hurombo.
Pindura Trincoso Bear